Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / WOWOW Donsela phansi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Futha Head For Ikhishi Sink Umpompi
WOWOW Donsela phansi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Futha Head For Ikhishi Sink Umpompi
1. ISAZISO NGAPHAMBI KOKUTHENGA: KUPHELA Isixhumi se-G1 / 2 (MALE) (Cishe u-2 cm noma u-0.8 amayintshi), Hhayi i-NPT, Hhayi indawo yonke
2. IMISEBENZI EMITHATHU: ukusakaza, fafaza futhi ume kancane. Mane ucindezele bese ukhipha inkinobho ukushintsha kusuka ekusakazweni okuvamile ukufafaza. Qhubeka ucindezele inkinobho eyindilinga phezulu futhi izomisa ukugeleza kwamanzi.
3.KULULA UKUHLANZA NOKUFAKA:I-aerator yekhwalithi ye-ABS ingavulwa kalula ngohlamvu lwemali, awekho amanzi anzima nesikali, egcina ukusetshenziswa kwempilo namazinga esezingeni lamanzi. Udinga nje ukukhipha eyokuqala bese uyishintsha ufake entsha.
4.IQophelo Eliphezulu: yakhiwe kahle ngepulasitiki ye-ABS yobunjiniyela enesiphetho se-premium brushed nickel sokuqina, imelana ngempumelelo nokugqwala kwansuku zonke nokungcola, inikezela ngokulula kwansuku zonke kokuhlukile
5.Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emibili nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi esifanele. Imbozwe yimbuyiselo elinganiselwe yezinsuku ezingama-2. SICELA UXHUMANE NA-EMAIL❤service@wowowfaucet.com